Football Khabar » बार्सिलोनाका लिजेन्ड जाभी र इनिएस्टाको भन्दा रोनाल्डोको असिस्ट बढी !
बार्सिलोनाका लिजेन्ड जाभी र इनिएस्टाको भन्दा रोनाल्डोको असिस्ट बढी !
कतिपय फुटबल समर्थक हाल इटालियन युभेन्टसबाट खेलिरहेका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई ‘गोल गर्न स्वार्थी’ खेलाडी मान्ने गर्छन् । कतिपय उनलाई ‘असिस्ट नदिने’ खेलाडी पनि मान्छन् । समान्य समर्थकहरूको आलोचना हुन्छ– ‘रोनाल्डो जसरी पनि आफैं गोल गर्न खोज्छन्, सहकर्मीलाई बल पास दिँदैनन् ।’
तर, रोनाल्डोको हालसम्मको सिंगो करिअर रेकर्ड हेर्ने हो भने चाहिँ तथ्यांकले विल्कुल फरक कथा भन्छ । रोनाल्डोको सिंगो करिअरलाई तथ्यांकमा ढालेर हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ– रोनाल्डो गोल मेसिन–गोलकर्ता खेलाडी मात्रै हैनन्, उनी एक शानदार प्ले मेकर–असिस्ट मास्टर खेलाडी पनि हुन् ।
हालै चर्चित संस्था ‘ट्रान्सफर मार्केट’ ले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्यांकअनुसार रोनाल्डोले आफ्नो करिअर दौरान गरेको कूल असिस्ट संख्या स्पेनिस बार्सिलोना क्लबका लिजेन्ड खेलाडी पूर्वकप्तान जाभी हर्नान्डेज र आन्द्रेस इनिएस्टा भन्दा बढी छ । जबकि, जाभी र इनिएस्टा बार्सिलोनाका लागि मात्रै नभएर फुटबल इतिहासमै उत्कृष्ट मिडफिल्डर–प्ले मेकरमध्येमा पर्छन् ।
फेब्रुअरी महिनाबाट ३५ वर्ष पुग्न लागेका रोनाल्डोले क्लब र देशको टोलीका लागि जति उपाधि जितेका छन्, गोल र असिस्ट पनि उत्तिकै पर्याप्त गरेका छन् । युभेन्टसमा दोस्रो सिजन बिताइरहेका रोनाल्डो अहिले पनि उत्कृष्ट लयमा छन् ।
रोनाल्डोले पूर्वक्लब स्पोर्टिङ लिस्बन, म्यानचेस्टर युनाइटेड, रियल मड्रिड र युभेन्टसका लागि गरी हालसम्म क्लब स्तरमा कूल ६२० गोल गरेका छन् । सोही अवधिमा उनले यी चारवटै क्लबका गरेको कूल असिस्ट संख्या २१४ पुगेको छ ।
यता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि हालसम्म कूल ९९ गोल गरेका छन् । सोही अवधिमा उनले ३७ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । रोनाल्डोले क्लब र देशका लागि गरी हालसम्म गरेको कूल असिस्ट संख्या २५१ पुगेको छ ।
यता, हाल कतारी क्लब अल सदाको प्रमुख प्रशिक्षक रहेका बार्सिलोनाका असिस्ट मास्टर जाभीले क्लब फुटबलमा कूल ८५९ खेलबाट २१२ असिस्ट गरेका छन् । जसमा उनले १३१ खेल स्पेनका लागि खेल्दै २४ असिस्ट गरेका छन् । फुटबलबाट सन्यास लिइसकेका उनले करिअर दौरान कूल २३६ असिस्ट गरेका छन् ।
यता, बार्सिलोनाका अर्का पूर्वकप्तान तथा प्ले मेकर इनिएस्टाले आफ्नो करिअर दौरान ७१५ खेलबाट बार्सिलोना र हाल खेलिरहेको जापानी क्लब भिसेल कोबेका लागि समेत गरी १५० असिस्ट मात्रै गरेका छन् । उनले स्पेनका लागि १३१ खेल खेल्दै मात्रै २९ असिस्ट गरेका छन् । उनको कूल करिअर असिस्ट संख्या १७९ हुन्छ ।
समकालीन फुटबलमा सर्वाधिक असिस्टमा यदि कसैले रोनाल्डोलाई पछि पार्छ भने उनी बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी मात्रै हुन् । मेस्सीले क्लब बार्सिलोना र अर्जेन्टिनाका लागि गरी हालसम्म कूल २९८ असिस्ट पूरा गरेका छन्, रोनाल्डोको भन्दा मात्रै ४७ असिस्ट बढी हो ।
अंकमा कूल असिस्ट संख्या
रोनाल्डो – २५१
जाभी – २३६
इनिएस्टा – १७९
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार १९:५४